China PVC zvemapuranga hexagonal waya mambure fekitari uye bhizimisi | XINTELI
PVC zvemapuranga hexagonal waya mambure
Kwakakurudzira welded waya pajira riya
PVC bemhapemha welded waya mambure ...
Yakagadziriswa banga rakarukwa munda fenzi
Product Type: PVC zvemapuranga hexagonal waya pajira riya
Chinyorwa: Yakakwira yepamusoro epurasitiki yakavharwa simbi waya, yakaderera kabhoni simbi waya
Pamusoro Kurapa: PVC Coated
Pvc yakadhinda hexagonal waya pajira riya islo inozivikanwa se chinken netting. wedzera hupenyu hwebasa renetiweki, anti-ultraviolet, anti-kuchembera uye mamiriro ekunze. Kusarudzwa kwemavara akasiyana kunogona kunongedza nharaunda yakapoteredzwa. Kazhinji, ruvara rwakakurumbira ndere green.
Plastic hexagonal waya pajira riya sechinhu chinovhara, zvinowanzoshandiswa petrochemical maindasitiri, kuvaka, aquaculture uye zvichingodaro.Such sekuvakwa kwakagadziriswa masvingo, pasi kongiri ndiro yekusimbisa, kupisa kuchengetedza, kupisa kupisa; Simba chirimwa chakaputirwa pombi, bhaira kupisa kuchengetedza , antifreeze, kuchengetedzwa kwekugara, kuchengetedzwa kwenzvimbo.Can inogona kushandiswa kupfuya huku, dhadha, tsuro uye chero dzimwe mhuka dzemombe.
Rudzi rwebhizinesi: Fekitori & Kutengesa Kambani
Main Zvigadzirwa: Wire Mesh, Metal Fence
Gore rekugadzwa: 2008
Nzvimbo: Hebei, China (Mainland)
Saizi saizi: 1 ``, 1/2 '', 5/8 '', 3/4 '', 2 ''
Waya Gauge: 0.9mm ~ 2.0mm
Kureba: 5m, 10m, 25m, 30m, nezvimwe.
Upamhi: 0.5m ~ 1.5m
Zvimiro: Ngura-inodzivirira, ngura-inoshingirira, inogadziriswa nemishonga, inoungana nyore.
Matauriro: Masayizi asiri iwo ataurwa pamusoro anogona kuitirwa odha mushure mekusimbiswa.
huku yehuku, gadheni gadheni, vana nhandare, Kisimusi kushongedzwa.
Uchishandisa inyore, hupenyu hwakareba hwebasa, yakasimba kuchengetedza simba, chengetedza mutengo wekufambisa, mukana wakanaka wekuchinja.
Apex & ainge atumirwa
FOB Chiteshi: Tianjin
Kutungamira Nguva: 15 ~ 30days
Mapakeji: a.Mumipumburu, yakaputirwa nemvura mapepa mapepa
c. Imwe nzira yekurongedza pamwe inogamuchirwa mushure mekusimbiswa
Kubhadhara & kuendesa
Maitiro Ekubhadhara: T / T, Advance TT, Paypal Etc.
Isu tiri kutarisa kune ino ndima kwemakore mazhinji uye isu tine ruzivo rwakawanda pane waya mesh uye simbi fenzi.Zvese zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro zvinhu. mushure mekusimbiswaMutengo wedu unonzwisisika.Tinoda kuchengetedza mhando yepamusoro kune vese vatengi kubva pasirese.
Pashure: Kwakakurudzira welded waya pajira riya
Zvadaro: Kwakakurudzira hexagonal waya pajira riya Animal Fence
Kwakakurudzira hexagonal waya pajira riya Animal Fence